Daawo: Murankii UCID oo cirka isku sii shareeraya iyo Musharax Jamal Cali Xuseen oo si sharciyeysan uga hadlay muranka | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Musharaxa madaxweynaha xisbiga UCID Jamal Cali Xuseen ayaa si faahfaahsan uga hadlay muranka iyo buuqa ka taagan xisbiga UCID. Waxaanu sheegay inaanay suurtogal ahayn dibuqiimaynta iyo tartanka uu gudoomiyaha xisbigu sheegay in lagu samaynayo xisbiga UCID. Wuxuu soo bandhigay go,aankii ka soo baxay kalfadhigii golaha dhexe ee lagu ansxiyey musharaxnimada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo nuqulkooda loo diray, maxkamada sare, gudida dooroshooyink iyo gudida diiwaangelinta xisbiyada. Waxaanu sheegay inaanay awooda Faysal Cali Waraabe ahayn cida go,aan ka gaadhaysa musharaxiinta xisbiga. Waxaanu ku goodiyey Jamaal inaanu xisbiga uga cararayna Faysal sida Cabdirashiid sameeyee, inuu isagu noqonayo ninka uGu danbeeya ee ka taga UCID oo uu uga hor tegidoono Faysal Cali Waraabe- Shirkaas jaraaid ee dhamaystirn halkan hoose ka daawo